Ọdụ ụgbọ mmiri Berna González. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke El pozo | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ọdụ ụgbọ mmiri Berna González. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede El pozo
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede
Foto: Osimiri Berna González. Nkọwa Twitter.
Ọdụ ụgbọ mmiri Berna González, onye edemede, odeakụkọ na onye na-emekọ ihe ọnụ na ọdịbendị, nwere ọrụ dị oke mkpa ma dị mkpa yana n'ụdị ojii ojii ọkachasị. Onye Okike nke Kọmishọna Ruiz eweputala akwukwo ohuru na ahia, nke isiokwu ya bu Oghere. Na n'elu, Nrọ nke uche, were Onyinye Dashiell Hammett 2020, nke Black Week nke Gijón nyere nke kachasị mma nke ụdị na Spanish. Tupu, ọ bụ onye ikpeazụ na otu award na Anya mmiri Claire Jones. Na nke a Ajụjụ ọnụ Berna na-agwa anyị maka ọrụ ọhụụ a yana ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ, dịka ndị ode akwụkwọ kachasị amasị ya, ọgụgụ ya na ọrụ ya ugbu a, ma ọ bụ otu esi ahụ ọnọdụ mbipụta ugbu a. Yabụ Enwere m ekele maka oge gị ijere m ozi, tinyekwara obiọma ya.
Berna González Harbor abiala ma so kwa otutu ndi nwuru anwu akwukwo na nso nso a anyi huru ya dika onye obia na mmemme Nwa ntụpọ, na Ciudad Real. N'akụkọ nta akụkọ ya, ọ bụ osote onye ntụzi nke El País, ebe ọ bụ onye editọ nke Bebelia ma zipụ pụrụ iche. Were akwụkwọ ngosi Kedu ihe ị na-agụ? ma soro na nchịkọta nke Kwa ụbọchị, na Cadena Ser.
BERNA GONZÁLEZ HARBOR - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: El mmiri nke ọma ọ bụ akwụkwọ ikpeazụ gị. Kedu ihe ị gwara anyị maka ya na ebe echiche a siri?
BERNA GONZÁLEZ ỌBARA: Oghere bụ a akwụkwọ akụkọ thriller site na ọdịda nke nwa agbọghọ na olulu mmiri na mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-agba ya gburugburu. Akụkụ nke a echiche n'oge Ikpe Julen na ihe omume ndi ozo nke ghoro ndu ala ma di ocha ihe mmetuta, karịa na ezigbo akwụkwọ akụkọ.
AL: Can nwere ike ịlaghachi na akwụkwọ mbụ ị gụrụ? Na akụkọ mbụ ị dere?
BGH: Enwere ọtụtụ, site na Alice na Wonderland ka akụkọ nke Andersen. Ejiri m oge m bụ nwata dee ọtụtụ cartas ka ụmụ nwanne nne m, nne na nna m, ụmụnne m, ndị enyi m, ebe ahụ ka m nọ nwee mmasị ide ihe. Anaghịzi ede akwụkwọ ozi dị njọ taa, ọ bụ akpa obi ọjọọ.
AL: Onye isi edemede? Nwere ike ịhọrọ karịa otu na site na oge niile.
BGH: Cees Noote Boom. Alice Munro. Echefula ndị Russia dị ka Dostoevsky, Gogol ma obu Tolstoy ma ọ bụ Latin America dị ka ndị nke ọganihu.
AL: characterdị omume dị a bookaa ka akwụkwọ na-amasị gị ịchọta na ịmepụta?
BGH: Otu n'ime Agba Ochie. Enwere m mmasị na ndị ahụ na-enweghị isi bụ ndị dị njikere ọbụna ịchụ nwa nwoke. Agaghị m aghọta ha ma ọ bụ ya mere ha ji adọta m.
AL: Omume ọ bụla ma ọ bụ omume pụrụ iche ma a bịa n'ide ma ọ bụ ịgụ?
BGH: A kọfị Ọ bụ naanị mania, naanị ọgwụ riri ahụ ịmalite ide ederede. Iji na-agụ, ihe ọ bụla.
AL: Na ebe masịrị gị na oge iji mee ya?
BGH: Edere m n'ụlọ ọgwụ, na ọdụ ụgbọ elu, na paseeji, n'ihe ndina, n'ụsọ osimiri ma ọ bụ en cualquier lugar. Mgbe ụtụtụ. Uche m na-eme m naanị n'ụtụtụ.
AL: Enwere ụdị ndị ọzọ na-amasị gị?
BGH: Na ịkọ akụkọ N'izugbe. Na edemede na uri, n'ezie.
AL: Gịnị ka ị na-agụ ugbu a? Na ide?
BGH: M na-agụ usoro nke Ali smith na Nordic. Ana m anapụta a edemede na Goya, ntakịrị ihe ijuanya.
AL: Olee otu i chere ọnọdụ mbipụta akwụkwọ ahụ dị na gịnị kpebiri ị gbalịa ibipụta ya?
BGH: Ọ bụrụ na ị bụ onye edemede ị na-ede, ọ bụrụ na ị dee ị chọrọ ibipụta. Agbalịrị m ma ọ mere. Achọghị ọzọ. Nnabata ahụ dị mma ma ọnọdụ mbipụta akwụkwọ emeriwo ọrịa na-efe efe n'ụzọ zuru oke na nsogbu akwukwo.
AL: Ọ bụ oge nsogbu anyị na-enwe na-esiri gị ike ma ọ bụ ị ga-enwe ike idobe ihe dị mma maka akụkọ ọdịnihu?
BGH: Enwere ọtụtụ ihe dị mma, site na echiche edemede: mmata nke enweghị ike, nhazi ọnọdụ, ike nke ahu putara n'ime anyi. Ọbụna ihe mgbu bụ nnukwu akụrụngwa maka ide ihe, nke bụ naanị ihe igwu ala n'ime onwe anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Ọdụ ụgbọ mmiri Berna González. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede El pozo
Ezinụlọ nke Cave Bear
1 nde akwụkwọ n'efu na ngwaọrụ ọ bụla?
Gbalịa ya n'efu!